XAQIIQO DAAHSOON: Ogow 5-ta Koox Ee Uusan Waligiis Ka Badin Tababaraha Arsenal Ee Wenger %
Tababaraha kooxda kubada cagta Arsenal, ee Arsena Wenger, ayaa wuxuu wareega Sideed dhamaadka tartanka Europa League, uu ku wajihi doonaa kooxda CSKA Moscow.
Naadigaan oo wadanka Ruushka, ka dhisan ayaa waxay tahay mid habaar uu ka haysto macalinka Gunners-ka, inuu ka badiyo mar walba oo uu ka hor-yimaado.
Waxay kamid tahay shanta koox, kuwaasoo uusan waligiis ka badin hogaamiyaha kooxda Woqoyga London ka dhisan, kuwaasoo qaarkood Yurub ka dhisan.
Kooxaha kale ee afarta ah ayaa waxay kala yihiin: Fiorentina [Talyaaniga ayey ka dhisan tahay], PAOK Salonika [Gariiga ayey ka dhisan tahay, PSG [Faransiiska ayay ka dhisan tahay iyo Port Vale [England ayay ka dhisan tahay kooxdaan].
Dhanka kale, Wenger oo warbaahinta la hadlayay kadib ciyaartii ay xalay la dheeleen AC Milan ka hor inta aysan usoo bixin wareega 8-da Europa League, ayaa wuxuu sheegay inuu rejaynayo in kooxdiisa ay meel fiican ay ka gaarto koobkaan xiisaha leh.
“Sanadkaan tartanka wuxuu ka adag tahay sanadihii hore, inkastoo ay adag tahay inaan qaadno, hadana waxaan dooneynaa inaan meel fiican aan gaarno,” ayuu kusoo koobay macalinka kooxda kubada cagta Arsenal, ee wadanka UK ka dhisan.